विष्णु पौडेललाई प्रश्न: शंकर पोखरेललाई महासचिव छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न तयार हुनुहुन्छ? (भिडिओ) :: मनोज सत्याल :: Setopati
विष्णु पौडेललाई प्रश्न: शंकर पोखरेललाई महासचिव छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न तयार हुनुहुन्छ? (भिडिओ)
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल चितवनमा हुन गइरहेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव बन्ने तयारीमा जुटेका छन्। पौडेल जस्तै एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल पनि महासचिवमा दाबी गरेका छन्। पौडेल र पोखरेल दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका नेता हुन्।
नेतृत्वमा सहमति नजुटे एमाले महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा हुने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। तर आफू निकटकै दुई नेतालाई एउटै पदको प्रतिष्पर्धामा उतार्ने सम्भावना झिनो छ। यस्तोमा दुईमध्ये एकलाई उपाध्यक्ष बनाएर अर्कोलाई महासचिवको उम्मेद्वार बनाउने बाटो ओलीसँग छ।
पौडेल र पोखरेलसँगै एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि महासचिवको दाबी गरिरहेका छन्। तर पार्टीमा सहमति नजुटे पाण्डे महासचिव हुने सम्भावना छैन। अध्यक्ष ओलीले महासचिवका लागि छनोट गरेको व्यक्ति निर्वाचित अथवा सर्वसम्मत हुने अवस्था एमालेमा छ।
नेकपा एमालेको विधान अनुसार ७० वर्ष उमेर कटेपछि पार्टीको नेतृत्वमा दाबी गर्न पाइन्न। यसपटक एमालेको महासचिव निर्वाचित हुने व्यक्ति अर्कोपटक एमालेको नेतृत्वको दाबेबार समेत बन्नेछ। किनकि, अहिले एमालेको शीर्ष तहका भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतको उमेर हद अर्को महाधिवेशन अघि नै ७० कट्नेछ।
त्यसैले यसपटक एमालेमा महासचिव र उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने नेता अर्कोपटक नेतृत्वमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ। यसैबीच सेतोपाटीका मनोज सत्यालले एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलसँग एमाले महाधिवेशनमा केन्द्रीत भएर कुराकानी गरेको छन्।
एमाले महाधिवेशनमा तपाईंको दाबी कुन पदमा हो?
मेरो दावेदारी गौण विषय हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको दाबी महत्वपूर्ण विषय हो। एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा दाबी के हो भने एमालेले नेतृत्व नगरेसम्म यो देश बन्दैन। विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढ्न सक्दैन।
तपाईंले नेकपा पार्टी बन्दा पनि महासचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। तपाईंलाई नेता/कार्यकर्ताले महासचिव उठ्नुस् भन्नु भएको छैन?
नेता कार्यकर्ताको इच्छा छ भन्ने कुरा सत्य हो। मलाई पनि भनिरहेका छन्। म कहाँ उम्मेद्वारी दिन्छु भन्ने कुरा मंसिर ११ गते बिहान सार्वजनिक गर्छु।
हालसम्म महासचिवमा शंकर पोखरेल र तपाईंको दाबी छ। दुईमध्ये एकलाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था केपी शर्मा ओलीलाई छ। तपाईं त्यस्तो व्यवस्थापन वा सहमतिमा जान तयार हुनुहुन्छ?
मामिलालाई त्यसरी बुझ्नुहुन्नँ। पार्टीको मुख्य नेताको हिसाबले कस्तो टिमलाई लिएर म पार्टी निर्माणको कामलाई अघि बढाउँछु भनेर सोच्ने अभिभारा अध्यक्ष केपी ओलीसँग छ। प्रश्न के हो भने उहाँले साथीहरुसँग सल्लाह गर्ने हो। आफ्नो सुझाव राख्ने हो। कोही पनि साथी प्रतिष्पर्धामा जाने इच्छा गर्नुहुन्छ भने उहाँले रोक्ने कुरा हुँदैन।
तपाईं र शंकर पोखरेलबीच चुनाव हुनसक्छ?
यो प्रश्नको सान्दर्भिकता के छ र? यो प्रश्न किन सोध्नुपर्‍यो? मलाई के लाग्छ भने अहिले यो प्रश्न सोध्नेबेला भएको छैन। हामी सहमतिको प्रयासमा छौं। सहमति बाध्यकारी विकल्प होइन। हामी स्थितिबारे र कसले के जिम्मेवारी लिने छलफल गर्छौं। छलफलमा सहमति भए तदनुकुल हामी अघि बढ्छौं। सहमति हुन सकेन तदनुकुल अघि बढ्छौँ। यो प्रश्नको जवाफ हामी उचित समयमा दिन्छौं। हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
एमाले भित्र विगतमा लामो विवाद भयो। दश बुँदे सहमतिबाट कतिपय नेता पार्टीमै रहने अवस्थाम पुग्नुभयो। नेकपाबाट पूर्व माओवादीका नेता एमाले बन्दा एमालमै रहने निर्णय गर्नुभयो। प्रतिष्पर्धाले उहाँहरु पाखा पर्नुहोला। सहमति जरूरी होइन?
प्रतिष्पर्धाबाट पनि आउनुपर्ने साथी कोही पनि छुट्नु हुन्न। सहमतिबाट पनि कोही साथीहरु छुट्नुहुन्न। दुबैबाट आउनुपर्ने साथी आउनुहुन्छ। एमालेमा अहिले कुनै पूर्वसमूह अस्तित्वमा छैन। सन्दर्भमा पूर्व पृष्ठभूमी स्मरण गर्न सक्नुहोला। तर हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएर शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्छौं। हामी पूर्वपृष्ठभूमीका आधारमा कसैप्रति आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण बनाउँदैनौं।
एमाले अध्यक्षमा भीम रावलले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत हुने सम्भावना छ कि छैन?
भीमजीले उम्मेद्वारी मिडियामार्फत् इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ नोमिनेशन गर्ने बिन्दुमा पुग्दा उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा पुर्नविचार गर्नुहुन्छ। र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा केपी शर्मा ओलीलाई निर्विरोध जिम्मेवारी सम्हाल्ने ढंगले योगदान गर्नुहुन्छ। आफूले पनि उपयुक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै अघि बढ्नुहुन्छ। यो उम्मेद्वारीमा अन्त्यसम्म कायम रहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
केपी शर्मा ओलीको कोर टिममा रहेकाबीचमै प्रतिष्पर्धा गर्ने अवस्था यो महाधिवेशनमा बन्छ?
एमाले केन्द्रीय समितिमा १९४ सदस्य छौं। पदेन अन्य ४ जना हुनुहुन्छ। सबै १९८ केपी ओलीको कोर टिम हो। यसमा छुट्याएर हेर्न खोज्नुभयो भने कुनै भिन्नता पाउनुहुन्न।
एघारौं महाधिवेशमा तपाईंलाई नेतृत्व गर्नेगरि तयारी भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ नि? आफू पनि त्यसरी नै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले हामी दशौं महाधिवेशनमा छौं। दशौं महाधिवेशनले दिएका जिम्मेवारी सम्हाल्दै अघि बढ्छौं। अहिले नै एघारौं महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
पूरा अन्तर्वार्ता भिडिओमा हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ९, २०७८, ०५:००:००